पार्टनरसँग पहिलो रातको डर ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पहिलो रातमा पहिलोपटक फिजिकल हुँदा, पहिलोपटक भेट्दा धेरै मानिसहरूको हालत खराब हुने गर्दछ । सोच्नुहोस् त पहिलोपटक सम्बन्ध बनाउन कति धेरै मुस्किल हुन्छ होला !
यदि, पहिलो रातको डर नभए त्यो रात खास नहुन सक्छ । लजाउने मान्छे होस् वा बिन्दास मान्छे, यी कुराहरू जान्नैपर्ने हुन्छ । तर, प्रायः यस मामलामा महिलाहरू डराइरहेका हुन्छन् ।
बिहेपछिको पहिलो रात
बिहेपछिको पहिलो रात होस् वा गर्लफ्रेन्डसँगको भेटमा होस जुन स्थितिमा पनि केटाले तयारी गर्ने गर्दछन् । खासगरी, एरेन्ज म्यारिज गर्ने कपललले यस्तो बढी सामना गर्नुपर्दछ । धेरै मानिसहरू यसै डरले गर्दा महिनौँसम्म सेक्स लाइफलाई राम्रो बनाउन सक्दैनन् ।
पहिलो रात कस्तो हुनुपर्दछ ?
यो प्रश्नलाई लिएर एक कपल भन्छन्–‘हामीले पहिलो रातलाई लिएर एकदमै डराएका थियौँ । तर, हामीले सोच्यौँ कि, पहिलो रातको बारे नसोची कसरी दोस्रो रातको बारेमा सोच्न सक्छौं । त्यसैले, पहिलो अनुभवलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ । किनकि, केही गडबड भयो भने झन् कुरा बिग्रिन सक्छ । त्यसैले, हामी आफैंले मानसिक तरिकाले सम्हाल्नुपर्दछ र पहिलो रातलाई यादगार बनाउनुपर्छ ।’
तनावमुक्त माहोल बनाउनुपर्दछ
पहिलोपटक कसैसँग भेट्दा तनाव वा डर हुन सक्छ । तर, सहज तरिकाले उपस्थित भई यो समस्याबाट टाढा हुन सकिन्छ । यदि, पार्टनर धेरै डराएमा वा आत्तिएमा भने उसको हात छोप्ने, सँगै बस्ने, कुराकानी गर्ने, पानी पिउने वा केही समय रमाइलो गर्दा महिलाहरूलाई तनाव वा टेन्सनबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
उत्तेजित हुनबाट बच्नुपर्दछ
यस दौरानमा उत्तेजित हुनु ठीक नहुन सक्छ । यसले गर्दा पार्टनरको मनमा सेक्सलाई लिएर अझ धेरै डर पैदा हुन सक्छ । त्यसैले, पहिलो दिन कन्ट्रोल गर्नुहोस् । यदि, माहोल ठीक भए मात्र बल्ल सम्भोग गर्नुपर्दछ ।
भर्जिनिटीलाई लिएर प्रश्न नगर्ने
पहिलोपटक सम्बन्ध राख्दा पुरुषहरू भर्जिनिटी (कुमारीत्व) लाई लिएर बढी उत्सुक हुन्छन् । यसले गर्दा पार्टनरको दिमागमा उल्टो असर पर्न सक्छ । त्यसैले, भर्जिनिटीलाई लिएर केही प्रश्न गर्नुहुँदैन ।
पहिलो रातको डर केटा र केटी दुवैलाई हुन्छ । फस्र्ट नाइटमा जतिको डर केटीलाई हुन्छ, त्यति डर केटालाई पनि हुने गर्छ । कोहि केटा लज्जालु हुन्छन भने कोहि केटिहरु बोल्नै सक्दैनन ।
यस्तो अवस्थामा कोहीले पनि सेक्सको मज्जा लिन पाउँदैनन् । त्यसैले, यस्तो भय वा डरलाई टाढा राख्न आवश्यक पर्दछ ।
सेक्सका यी कुरा पार्टनरलाई सेयर गर्नुहोस्
गर्भावस्थामा सेक्स गर्दा यी कुरामा ध्यान दिऔं
ज्योतीको गीतमा अभिनेता आर्यन (भिडियो सहित)
गीतकार ज्योती गुरुङको ‘सधैं सँगै’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक गंगाराज राई र गायिका दीपा लामाको स्वर रहेको